Akanyanya kufadza mabhuku, akanyanya kusarudza mabasa enguva dzichangopfuura | Zvazvino Zvinyorwa
Akanyanya Kufadza Mabhuku
John Ortiz | | Vanyori, Mabhuku, dzakawanda
Mune zvinyorwa zvenguva ino zvinonzwisiswa ne "akanakisa mabhuku thriller”Kune iwo mabasa akanyorwa aine huwandu hukuru hwekufungira, kutarisira, kushushikana uye kushamisika. Kunze kwekuburitsa ndima dzine dudziro inovhiringidza, vanyori vane mukurumbira veiyi subgenre yenhema vanowanzo kutamba nehunhu hwemuverengi.
Kazhinji, Chinangwa chemunyori ndechekukurudzira kuratidzira muvatariri kuburikidza neyakaomesesa zano, inotungamirwa nemavara ehukuru hwepfungwa. Iko, hapana chinhu (chinhu, munhu, maonero, marongero, tsananguro dzekunzwa ...) inoiswa zvisina kurongeka, uye kunyangwe iwo diki diki ane basa nemhedzisiro.
1 Chinyorwa cheMhando Dzakanyanya Kufadza
1.1 Iyo Pelican Report (1992), naJohn Grisham
1.2 Hart's War (1999), naJohn Katzenbach
1.3 Shutter Island (2003), naDennis Lehane
1.3.1 Plot uye mamiriro
1.4 Paunenge uchirara (2011), naAlberto Marini
1.5 Iyo Sleeping Doll (2012), naJeffery Deaver
1.5.1 Chirongwa uye zvinyorwa
Chinyorwa cheMhando Dzakanyanya Kufadza
Heino runyorwa ruzere rwemabhuku anomiririra mumhando iyi:
Chirevo chegwenga (1992), naJohn Grisham
Iyo Pelican Brief - MuchiRungu - inoverengero yechitatu nemunyori anokunda mubairo muAmerica uye wezvematongerwo enyika John Grisham. Munyori anoonekwa senge isingazungunuke mukati mezvinyorwa zvemazuva ano zveNorth America uye Anglo-Saxon pop tsika mune zvese. Uye izvi hazvishamise, nekuti, kunze kwekutengesa anopfuura mazana emamirioni emabhuku, iwo mafirimu anochinjika enhau dzawo akabudirira muhofisi yebhokisi.
Iri basa rine zvese zvinhu zve thriller mapurisa akazoita mutengesi. Ndokunge, mavara ane hukuru hwakakura hwepfungwa, budiriro ine twists isingatarisirwi uye nemhando yekurondedzera iyo inotyisa sezvinoita muropa kune vaverengi. Ehe, haugone kupotsa mhondi iyo kuzivikanwa uye zvinangwa zvinovhiringidza munhu wese panoperera nyaya.
Mune ino kesi, kufa kwekutanga (kunofungidzirwa kuti kwakabatana) ndekwevatongi vaviri vane mbiri, mumwe akasununguka uye mumwe anochengetedza. Neichi chikonzero, Kufambira mberi kwekutsvagisa kunoteedzerwa zvakanyanya nevatori venhau uye neruzhinji maonero Kunyangwe huchenjeri hwematsotsi, mudzidzi wezvemitemo (Darby Shaw) anoita kunge anogadzirisa mibvunzo yakatenderedza humhondi.
Chirevo chePelican ...
Hondo yaHart (1999), naJohn Katzenbach
Ipo John Katzenbach akazozivikanwa pasi rese Iyo psychoanalyst (2002)Izvi hazvireve kuti mabasa ake ekare akaderera. Saizvozvo, Hondo yaHart ndeimwe yemanyorerwo akanakisa nemunyori wekuAmerica uyo anonyanya kugadzirisa zvinyorwa zvekufungidzira. Pamusoro pezvo, mubhuku rino Katzenbach inoongorora kumwe kunzwa kwekudzikisira kwemunhu.
Mukupisa kweHondo Yenyika II, Aviation Lieutenant Tommy Hart anotorwa mushure mekuve iye ega akapona pakudonhedzwa kwechikwata chake chose.. Anobatwa muStalag Luft 13 (muBavaria, Germany) pamwe nevamwe varwi kubva kudivi reAllied. Nguva pfupi gare gare, Hart anotarisa vamwe vake vasungwa vanogamuchira kusvika kwemusungwa wemuAfrica -America, Lincoln Scott, nekufungira.
Kunyangwe ariwo mutungamiriri muAllied Forces, Scott anosarurwa nekuda kweganda rake. Kuita kuti zvinhu zviwedzere kuipa, mumwe wevasungwa anowanikwa akafa uye Scott anopomerwa mhosva iyi. Naizvozvo, Hart anofanirwa kushandisa zvese zvidzidzo zvake zvemutemo kuyedza kuponesa hama yake kubva pamutongo wakakombama. Kana akakundikana, musoja asingabatsiri anotarisana nerumwe rufu.
Hondo yeHart (MAXI)
shutter Island (2003), naDennis Lehane
Plot uye mamiriro
Zhizha ra1954; zuva reCold War. Commissioner weUS Teddy Daniels nemumwe wake Chuck Aule vanosvika kuAshecliffe Hospital yeCriminally Ill paShutter Island.. Ivo vari pachinangwa chekutsvaga mupoteri ane njodzi anonzi Rachel Solano. Nekudaro, dutu rinorova chitsuwa nguva pfupi mushure mekuuya kwevaongorori.
Mune iyo sanatorium hapana zviripo zvinoita ... Nenzira imwecheteyo, Daniels anoita kunge ane yake yega ajenda zvine chekuita nesangano repfungwa. Uye ndezvekuti anofarira kwazvo kuziva nezve miedzo nemishonga yekuyedza uye nekuvhiya kune ngozi kunoitwa muchipatara. Pamusoro pe, Icho chakavanzika humbowo hunopesana neSoviet brainwashing chakanyanya kuvhiringidza.
Sezvo kuferefeta kuri kufambira mberi, Chuck anotanga kushamisika kuti - pamusoro pezvekunetsekana zvataurwa - Teddy ane zvimwe zvinokurudzira zvekuuya kuchitsuwa ichi. Zvisinei, ndidzo diki rematambudziko ako, nekuti vanonzwa kure kure nekutsvaga chokwadi uye mumwe munhu anoda kuvapengesa… Vangangodaro vasina kukwanisa kubva kuShutter Island.
Paunenge wakarara (2011), naAlberto Marini
Pakutanga, chinyorwa che Paunenge wakarara yakagadzirirwa pamuviri weiyo script yeiyo isingazivikanwe firimu firimu inotungamirwa naJaume Balagueró. Zvisinei, munyori akasarudza kunyora inoverengeka kuti aongorore zvakanyanya zvepfungwa dzevanyori. Nenzira imwecheteyo, mubhuku Marini ane mukana wekutsanangura zvakadzama mamwe mamiriro asiri kuratidzwa mufirimu.
Cillian, musuo wechivako muNew York, murume akaipa anotadza kunzwa kugutsikana kana kunzwisisa hupenyu hwake. Sezvineiwo, chinhu chega chinoita kunge chinopa hunhu uyu kumwe kuputsa mufaro wevamwe vanhu. Nechikonzero ichi, iye anofunga kuparadza hupenyu hwaClara, maroja weimba 5B, ane hunhu hunopikisana naye zvachose.
Kune mukuru inri we protagonist, Clara anowanzo sangana nedambudziko nemaonero akanaka uye kunyemwerera. In consecuense, Cillian -iye ane kiyi dzese dzechivakwa nekuti ndiye musuwo- anotanga mutambo wakasuwa kuti aparadze Clara. Iyo macabre maitiro (iyo isiri kufa kana kushungurudzwa), iyo yaanoshuvira kuita kana apinda mumba make iye akarara.
Paunenge wakarara ...
Chidhori chakarara (2012), naJeffery Deaver
Chirongwa uye zvinyorwa
Muna 1999, musikana mumwe chete akaponeswa kubva pakuurawa (akavanzwa pakati pezvidhori zvake) naDaniel Pell, uyo akauraya mhuri yake yese.. Nechikonzero ichi, vezvenhau vakataura nezvemusikana mudiki se "chidhori chakarara." Saizvozvowo, ruzhinji rwevanhu rwakabhabhatidza mhondi se "mwanakomana waMason" nekuda kweboka rake revateveri vanonyanyisa vanokwanisa kumuitira hutsinye.
Gare gare, kana tsotsi iri rakaiswa mutirongo nekubvunzurudzwa nemumiriri Kathryn Dance - nyanzvi mumitauro yemuviri - anotya sekufadzwa kwaanoitwa naye. Icho chikonzero: Pell haazi mumwe munhu anodheerera. Ipapo, Danieri paanopukunyuka kubva mutirongo otangazve tsika dzekuuraya, Dhanzi anomanikidzwa kumuvhima ... zvisinei nekuisa njodzi paganda rake.
Chidhori chakarara ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Akanyanya Kufadza Mabhuku
Ndakaverenga chirevo chepalican nguva yadarika, uye chokwadi chinoshamisa. Yakakurudzirwa kune vese vanoda iyi genre.
Charles Dickens. Mamwe mabhuku mashoma anozivikanwa nemunyori wechiChirungu
Iwo akanyanya kufungira mabhuku